Qiso Kudhacday Lamaane Soomaaliyeed Oo Mudo Is Qabay Iyo haweeneyda Oo Wali Birko Ah & Saygeeda Oo Ka Wal Walsan Arinkaas (Qiso Dhab Ah) - iftineducation.com
Qiso Kudhacday Lamaane Soomaaliyeed Oo Mudo Is Qabay Iyo haweeneyda Oo Wali Birko Ah & Saygeeda Oo Ka Wal Walsan Arinkaas (Qiso Dhab Ah)
iftineducation.com – Waxa aduunka ku noolnahey ka dhaca mucjisooyin badan oo xagga alle ka timid, waxaan halkan ku soo qaadaneynaa sheeko cajiib ah oo la yaab leh, balse ah wax ka dhici kara aduunka dacaladiisa, inkastoo aysan aheyn wax aynu mar walba maqalno. Waxaa Shabakada Caanka Ah Ee oftineducation.com la soo xiriirey nin Magaciisa ku sheegay Maxamed waxa oona nooga sheekeeyeye dhibaato isaga iyo xaaskiisa haysata.
Maxamed waa 30 jir, isla markaana ah nin ganacsato kuna nool qurbaha. Maxamed ayaa markii hore guursadey gabar qurux badan oo ay ku dareen reerkooda, una dhashey labo caruur ah. Maadaama la isku darey oo aysan jirin wax jaceel ah oo ay wadaagaan ayaa waxaa danta ku qasabtey in ay kala tagaan dhowr sano kadib, ayna is fureen iyaga oo raali kala ah. Furiinki ka dib Maxamed waxa uu u dhoofey dibada, xaaskiisi hore iyo caruurtiisiina ku hareen Africa.
Gabdhan ayaa waxey ka mid aheyd dumarka wax ka iibsada tukaanka uu Maxamed ka shaqeeyo. Isla markii uu Maxamed gabadhaas isha ku dhufteyba wuu is hayn waayey, wuxuuna go’aan ku gaarey inuu barto Fartuun inta aan looga hormarin. Wey is barteen, phone number waa la is dhaafsadey, in mudo lix bilood ku dhow ayeyena wada socdeen. Shukaansi dheer iyo isfaham kadib wey is jeclaadeen waxeyna ku soo gabagabeeyeen xiriirkoodii iney is guursadaan iyaga oo dhigtay aroos yar oo diinta Islaamka raali ka tahey.
Nasiib daro Maxamed ayaa ogaadey iney wax jiraan isla habeenkii ugu horeeyey ee uu damcey in uu xaaskiisa u galmoodo. Si kasta oo uu isku dayaba wuu awoodi waayey in geedkiisa horey u galo farjigeeda. Muddo 4 saac kabadan ayuu kolba gabadha dhinac ka maraa oo isku dayey bal in uu mar uun horey malabyarowga u galo gudaha. Hase ka yaaabin, oo wuu awoodi waayey oo dhidid badan ayaa wejigiisa ka soo daatey isaga oo is leh “toloow maxaa jira, miyaan howl gabey” Fartuun oo la socota dhibka hasyta Maxamed ayaa iska seexatey iyada oo iska dhigtey war mooge. Nasiib daro Maxamed ma seexan, oo habeenkii ugu farxada badney ayaa waxey u noqotey habeenkii ugu naxdinata badneyd.
Shaqadii baa la guda galey, oo halka Fartuun kuba raaxeysaneyso waxa ninkeeda sameynayo maadaama ay sex ku cusub tahey, ayaa Maxamed isagu siddii habeenkii hore oo kale uu kolkba dhinac isku rog rogaa isaga oo siddii qof nafta ka baxeysa neefta tuuraya indhahiisa inuu kala furana diidey. Nasiib daro shaqadii guul daro ayey ku dhamaatey oo in geedkiisa hore u galo iska daaye xitaa biyihiisii baa lagu soo celiyey oo ma jiraan meel ay ka dusaan. Maxamed oo yaaban oo kala garan la’ in waxa uu sameynayo in ay tahey xaqiiq ama filim uu maskaxdiisa ka daawanayo ayaa iska seexdey habeenkaas.
Habeenba habeen-ka ka danbeeya sidey shaqadu u socotey kuna guul dareysaney ayaa waxa uu go’aan ku gaarey in uu xaaska kala sheekeysto sida ay wax u jiraaan. Maadaama uu Maxamed ahaa nin wadaad ah ma uusan jecleyn in uu gabadha lugaheeda kala bixiyo oo uu si fiican bal u arko farjigeeda uuna ogaado waxa meesha ku dahaaran. Balse si kastaba xaalku ha ahaatee Fartuun wey uga sheekeysey wixii ku dhacey iyo sida xun ee loo gudey, kuna soo dhibtootey. Kolkuu sheekadaa maqley ayuu u naxey xaaskiisa isaga oo leh dhib ma leh oo waa alle amarkii.
Maxamed iyo Fartuun wey isjecel yihiin oo sinaba iney u kala tagaan ma doonayaaan, balse Maxamed wax uu sameeyo wuu garan la’yahey. Waxa uu ku fakirey in uu iska furo una ogolaado iney saaxiibkiisa guursato mudo hal sano ah, kadib markii farjiga loo furo in uu saaxiibkiis iska furo gabadha kadibna ay isku soo laabtaaan. Fartuun arintaas waxba kama qabto laaakiin marka hore arintaas diinta islaamka maxey ka qabtaaa? Marka labaad ma hubo in saaxiibkii, oo uusan weli u sheegin, in uu arintaas ka aqbalayo in uu furo gabadha kadib markii uu ku guuleysto shaqadii uu Maxamed ku holwgabey. Hadey caruur u dhashana kaba daran oo sinaba u furi maayo dhib la’aan.
Hadaba aqristayaasha sharafta leh, ee ku xiran shabakada iftineducation.com ,waxa uu Maxamed idinka codsanayaa inta uusan iskafurin ama dhaqtar u tegin, maxaad arintaas ka leedihiin. Marka hore ma maqasheen mase aragteen arintan oo kale in qof Soomaali ah oo ku dhacdey, hadey jirtana sidey wax looga qabtey. Marka labaad maxey diinta Islaamka ka qabtaa in xaaska mudo gaaban la furo lana siiyo qof kale kadibna ay isku soo laabtaan mar danbe. Hadaba waad mahadsantihiin dhamaantiin waana idinka sugeynaa talo wacan iyo tusaale fiican. Wixii fikrad wanaagsan ah waxaad kusoo dirtaan iftineducationmedia@gmail,com insha allaah si wacan ayaan u gaarsiin doonaa fikirkaga
Nin Yahuudi ah labadiisa gabar uu dhalay oo Muslimaat ah ku taageeraya in ay qaataan xijaabka